Mkpokọta maka iri nri na Tim Cook ruru dollar 515.000 | Esi m mac
Mkpokọta maka iri nri na Tim Cook ruru $ 515.000
Onye isi Apple Tim Cook nwere àgwà nke ịgba mbọ rie nri ehihie kwa afọ yana onye ọrụ nke na-etinye ego kachasị na Charitybuzz na afọ a ego a rụzuru bụ $ 515.000. N’ikwu banyere ego enwetara na auction a, ọ ga-edo anya na ọ bụ nnukwu ego, mana ọ bụghị ọnụọgụ kachasị elu nke Cook nwetara n’ụdị auction a.
Oge mbụ Cook kwetara isonye na ụdị ọrụ ebere a, ọ welitere ọmarịcha $ 610.000, ego nke dara na afọ abụọ sochirinụ nke e mere otu auction ahụ nakwa na afọ a abawanyela nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ego anakọtara na 2015 gara aga. Onye ọrụ nke meriri auction anaghị eme ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a n'ihu ọha mana ọ obi abụọ adịghị ya Ọ bụ nnukwu ohere izute onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị mkpa n'ụwa.
Nke bụ eziokwu bụ na onye mmeri nke ahịa a abụghị naanị na ya na CEO nke Apple ga-eri nri, ụlọ ọrụ Cupertino na-etinye na tebụl nke otu VIP abụọ gafere maka isi okwu Apple ma gaa na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na Cupertino. N’ụzọ doro anya, njem na mmefu ndị ọzọ bụ ọrụ dịịrị onye meriri mmeri ahụ.
Ego niile a na-erite na auction na-aga na Robert F. Kennedy Foundation maka ikike ụmụ mmadụ, ma o doro anya na ọ na-eje ozi ka ọtụtụ ndị mara ntọala n'ihi mgbasa ozi nke mgbasa ozi na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mkpokọta maka iri nri na Tim Cook ruru $ 515.000
Oku edekọ maka Skype n'efu maka obere oge